Saraakiil ciidan oo ku wajahan magaalada Dhuusamareeb – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Saraakiil ciidan oo ku wajahan magaalada Dhuusamareeb
Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ku wajahan wafdi ka kooban saraakiil ciidan ah oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale.
Wafdigaan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneral Odawaa Yuusuf Raage ayaa waxaa safarkiisa ku wehlinaya taliyaha cusub qeybta guud ee booliska maamulka Galmudug Jeneral Bishaar Abshir Geedi iyo sidoo kale taliyaha guutada 15-aad ee qeybta 21-aad Jeneral Mascuud Maxamed Warsame.
Waxaa la filayaa Wafdiga Taliye Odawaa inay magaalada Dhuusamareeb kulamo kala duwan kula qaataan saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug.
Dhinaca kale, taliyaha ayaa sida la sheegay kormeer ku tagi doonna xeryaha ciidamada dowladda, isagoo halkaasi kula kulmi doonna ciidamo loo diyaariyay in dhawaan howlgal ka dhan ah Al-shabaab ay ka bilaaban deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa magaalada Dhuusamareeb laga dareemayaa qabana-qaabada soo dhaweynta wafdiga saraakiisha ciidan ee uu hogaaminayo Taliye Odawaa Yuusuf Raage oo xilliyadda soo socda ku soo gaari doonna halkaas.